Jeneral Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, ayaa booqday Saldhiga ciidamada Booliska Amisom ay ku leeyihiin Magaalada Muqdisho.(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Taliyaha Ciidamada Booliska Somaliyed Jeneral Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, ayaa booqday Saldhiga ciidamada Booliska Amisom ay ku leeyihiin Magaalada Muqdisho.
Saldhigan oo ku yaallo Stadio Muqdisho, ayaa taliyaha halkaasi waxaa ku soo dhaweeyay Cutubyo ka tirsan ciidamada Booliska Amisom oo Salaan Sharaf ku siiyay.
Taliye Xaamud, ayaa Saraakiisha ciidamada Booliska Amisom halkaasi wuxuu kula qaatay kulan looga hadlaayay wada shaqeynta ciidamada Booliska Somaliyed iyo kuwa Amisom ka dhaxeysa.
Ciidamada Booliska Amisom, ayaanan shaqo badan ka qaban Magaalada Muqdisho marka loo eego howlaha ay hayaan ciidamada Booliska Somaliyed oo u baahan caawimada ciidamada Booliska Amisom.
Taliye, Xaamud ayaa sheegay ciidamada Booliska Somaliyed inay u taagan yihiin suggida Nabadgelyada dalka, iyo sidii ay u difaaci lahaayeen shacabka Somaliyed.
Waxa uu ka sheegay Xafladii ay u sameeyeen ciidamada Booliska Amisom, ciidamada Amisom inuu aad ugu mahadcelinaayo sida ay ugu huraan naftooda ka shaqeynta Somaliya.